Akụkọ - Uru nke iko emechiri emechi
Iko ihe owuwu
Ihuenyo Ihuenyo Silk
iko siri ike
Iko na -ekpo ọkụ
Gilasi Dị Okirikiri
Igwe Nbipụta Dijitalụ
Okpokoro n'elu tebụl
Iko ụlọ ịsa ahụ
Ogwe osisi ịcha
Na Ihuenyo Ihuenyo Silk
Louver glass agụba
Smart Glass & Ihe nkiri Pdlc
Iko enyo nwere agba
Iko a gbara mmiri
Uru nke iko emechiri emechi
Nke pụtara ịsọpụrụ ụkpụrụ obodo nke iko a kpụrụ akpụ, iko kpụ ọkụ n'ọnụ, na iko oghere mere ha. N'ime ndị a, arụmọrụ kacha mma nke iko laminated na iko oghere nwere iko enyo enyo kacha mma. N'ime ụlọ ọgbara ọhụrụ, mmetụta mkpuchi ụda dị mma, ọ ghọwokwa otu n'ime ihe dị mkpa maka ndị mmadụ ịlele ịdị mma nke ụlọ.
Iko kpuchie ya na PVB interlayer nwere ike igbochi ebili mmiri ụda ma debe gburugburu ụlọ ọrụ dị jụụ na ntụsara ahụ. Ọrụ nzacha UV pụrụ iche ọ bụghị naanị na-echebe ahụike anụ ahụ ndị mmadụ, kamakwa ọ na-atọhapụ arịa ụlọ bara uru, ngwaahịa ngosi, wdg n'ụlọ. Ọ na -ebelata nnyefe nke ìhè anyanwụ ma na -ebelata ike oriri jụrụ oyi.
Ọtụtụ uru nke iko laminated nwekwara ike inwe mmetụta na -atụghị anya ya na nke ọma na ịchọ ụlọ mma. Iko a na-ewekarị ọkụ bụ iko nkịtị site na usoro ọgwụgwọ ọkụ, ike ya na-abawanye ugboro 3-5, nwere ike iguzogide ike ụfọdụ site na mmetụta mpụga ma ọ bụ mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ na-enweghị imebi, ọbụna agbajikwa, kamakwa iko ahụ dum. agbajiri n'ụgbụgbọ mmanụ a -ụ dị ka obere mkpisi Ọ dịghị mfe imerụ ndị mmadụ ahụ ma si otú a nwee oke nchekwa.
Enweghị ike ebipụ iko dị ọkụ. Ọ dị mkpa ka ebipụ ya nke ukwuu tupu iwe ewee ya ma nwee njiri mara "mgbapu onwe ya". Dabere na ojiji dị iche iche, enwere ike kewaa iko dị iche iche n'ụdị iko dị iche iche, iko ọkara ọkara, iko nwere mpaghara, iko dị larịị, iko gbara agba na ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ọnụ ụzọ ezinụlọ, gụnyere ọnụ ụzọ kichin, bụ enyo enyo jụrụ oyi. Anwụrụ ọkụ dị na kichin na -agbakọta n'elu mgbe ị na -esi nri, ma ọ bụrụ na ị na -eji iko kpuchie ya, ị gaghị enwe nsogbu a. N'otu aka ahụ, nnukwu iko nkewa n'ime ụlọ nwere ike bụrụ ihe nchekwa nchekwa maka ụmụaka na -arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ejiri iko kpuchie ihe, nne na nna nwere ike nwee ahụ iru ala. Ọ bụrụgodi na iko agbajikwa, iberibe na obere iberibe dị nkọ ka na -arapara n'ahụ ihe nkiri etiti.
A na -akpọkwa iko LED ka ọ bụrụ iko fotoelectric. Iko Power bụ ngwakọta zuru oke nke isi ọkụ ọkụ LED na iko, na -agbasa site n'echiche ọdịnala nke ihe ịchọ mma ụlọ. Enwere ike ịhazi ya n'ihu na ime ime iko, ma emesịa site na DMX teknụzụ ọgụgụ isi dijitalụ niile iji nweta mgbanwe nchịkwa, njikwa efu nke isi ọkụ ọkụ LED na mgbanwe. N'ime, a na -eji wired ndị na -apụtachaghị ìhè, nke dị iche na wired nkịtị na ahụghị ahịrị ọ bụla n'elu iko ahụ. Ka emechara ọgwụgwọ pụrụ iche na ọkwa ikpeazụ, ma ihe ndị achọrọ maka nka na nchekwa chọrọ erutela asambodo mba dị mkpa. ọkọlọtọ.
Oge nzipu: Mar-18-2020